Jawabtii ilyas jamac + Ayanle sicid+Qaarka Ka Mid Ah Xil Saylac iyo Fariin Ku Socota Wasiir Xigeenka Cafimaadka iyo Wasiiru Dawlaha Amniga. Dr.khadar-Libaaxley | Lughaya.Com
Added by Webmaster on June 4, 2017.
Nimanyohow af laba daanle baan hadalka dayneyne
Daleedaha cidlada laga ma shubo hadal daylqaaf
Dadku muuqa sare iyo magacuu ka simanyahay
Balse maanka hoosiyo miyirkoodu kala wacan.
Dacartii kacdiyo Cudur soo degaa La daweyn jiree
Doqoniimo wali Dabiib yaa u helay?
Siyaasi cabdi weyne xogta hadalkiisu wuxu xisaabsanaa ( Allahayow kufriyi maynoo kibir uga dhawaan maynee sacabka uun baa kalkii galay.) jihada hadalkiisu wuxu ku waran fiiqnaa xukuumada, gaar ahaan wasiirka madaxtooyada iyo wasiiru dawlaha amniga ; hadalkiisa waxa wakhtigan keenayna waa xaalada degmada saylac ka shidnayd baryahan , siyaasi cabdina in uu dan guud iyo faaleeyo wadanka hawlihiisa iyo xaalada dadkiisa iyo deegaankiisa intaba daw buu u leeyahay; hayeeshee marnaba ( mid koodna kaalay kaalay kuma odhan iyo suuldhabaale waa hadal ) ilyaas jamacii warbaahinta iska soo bilaash yuurar saday iyo ayaanle siciidka dawlada hoosee Borama ; ma iyagaa ismoodsiiyey xukuumadii iyo cidii uu la hadlaayey?! waa maxay isboobkani ?! waxase aan leeyahay ( qof iyo goonidiin baad iska durbaan raacdeene miyirkiyo hubsiintu male weeyi la huwado ).
1.) ilyaas jamacow : Ninba inuu garaad kii hadlaa gedihi reer dudub miyaanu runta isku sheegin horta?! mayor hadaad u bu’aysood u bukto; miyaanu ku deeqin mayorka degmada Borama ee reer dudub?! halkeed ka keentay degmada saylac iyo degmada Borama 2daba reer dudub mayor haka noqdo?! oo aad waliba sidii wax la duudsiye warbaahinta soo yuurar ? ma beelo ba’ay baad adiyo
reerkaagu ka hadheen?! kumaan ogeyn caqli xumo iyo xisaabtan xumo reer dudub ?! hadaaney kugu soo socon (ciladii reer axamed ba soo martay ) iyagoo Borama mayor ka ah, badhasaab ka gobolka iyo wasiirka jibriil yonis intaba markaliya wada haysta handana hoostaa ka quruflaynaayey; mise u jeedooyin horliyo hundo raadis baad tahay?
Run hadaynu isku sheegayno oo wax kala qaadaneyno hadii aad maanta haysato mayorka Borama qalad weeyi xataa in ( mayor xigeenka saylac aad ahaato; xaq waxa u leh beesha ciise oo aan waliba u rajaynaayo in ay helaan).
Reer dudub waa deegaan xaq iyo xuquuq buuxda ayey u leeyihiin in ay ( saylac mayor ka noqdaan; hayeeshee madagi shinkeed ha buuxanto; oo midhuhuba bisaylkay ku wacanyihiin in lagu cuno; maanta ma’aha maalintadii iyo saylac ; xoolahaba waa la kaal iyo xilli arooriyaa jooji damaca aan hubsiimaha iyo u meel-dayga toona la hayn).
Habar-xuseen iyo reer dudub wey isku sidkanyihiin, oo ul iyo diir dan-wadaaga weyi duruuf iyo xaalad kastoo jirtana ( xumo , xajiin iyo dani guracani dhexdooda ka dheer ; qoraalkaygani kaliya waxa uu xisabsanyahey caqli celin ? iyo walaal kaaweyn oo ku lexejeclo dishoonaya!! dawladu reer axamed wey u dhalatay waxa daliil u ah sidii ay ugu kiishtay wixii xilal soo maray oo dhan!! imika oo waayo aragnimo soo korodhay in fahamkii wacnaa dib loo jadiidiyo waa daruuri; si siday ahaan jirtay looga wacnaado.
2.) Ayaanle siciidow ( Hubaali’iyo muhmal xaajo lagu galay
Horaa loo madiidimayoo raga wey lugoysaa oo Laandaaqa naagood iyo laqan xume ma liibaano niyahow lahiinsiga iyo hadalka leeda fuulka iyo hanku wey ku lumiyaane ,Indhaha hoos u soo laaboo lafahaaga maaree.) inanka shaqaalaha ah eed ( xaal, xaal, xaal aad la haliilayso) miyaanu ahayn kaad shalay warbahinta ku lahayd dadkiibuu dhibay? Hadaan u amba baxayaa illaa saylac oon bakoorad la soo dhacayaa iyo laad ? goor maad rafiiq iyo raaliyo u noqotay waa yaabe ? Waxase horay looyidhi ( Mabda’ nimaan la hayn iyo la baray dhadhamo raac , Darsin baa u markhaatiyo ninkii bixiya diinaar, Waa waxa daruuriyo rafacay deeqdii eebbe. )
Barashaa kuugu laaban malahee dawlada hoose degmada Saylac wey ka miisaaniyad iyo dakhli badantahay Badantahay badi
magaalooyinka waaweyn ee dalka oo ay ku jirto (Borama, laascaanood, ceerigaabo iyo waliba Burco mararka qaar ) sababtuna waxa ku yaal kastamka 3aad ee dalk ugu weyn; taasi waa ta u sahashay mayorka saylac xuseen iidle in uu waxbadan oo dhanka horumarka ah degmadiisa ka qabto.
Siyaasi cabdi weyne muu odhan ( reer maxamuud nuur baa reer baki ah somaliland iyo reer faarax nuur baa reer aw-bare ah ethoipia !! xataa may jirin reer uu soo hadal qaaday kaliya waxa uu sheegay in cabdi reerkiisu badi ku jiro caloosha somaliland !! haduu ba intaa yidhi Waa hibo illaahay iyo hodanku deeq uu bixiyaaye , Maxaa adiga hagardaamiyo kuugu jira dhibiyo hawl ?!.)
3.) Xildhibaanada reer saylac badi magaalooyinka waaweyn ee dalka meel walba mooshinaa yaala ay xildhibaanada deegaanada kala duwani mayoradooda u soo gudbiyeen? Waxa ay idinkaga wanaagsanaadeen wacyigooda iyo ogaalkooda ayaa la socda ( go’aankii iyo xeerkii xukuumadu soo saartay ee ahaa in 8 bilood ka hor doorashooyinka madaxtooyada wax mooshin iyo kal fadhi ah aan dalka laga qaban karin meel ay tahayba ) ma xildhibaanada intaa fahmi kariwaayey ayaa degmada saylac horumar u keenaaya? Ma ku waasi baa aayo laga sugayaa?.
4.) wasiiru dawlaha amniga iyo Badhasaabka saylac : waxa nusqaan , jahli iyo basar xumo ku dul bururtay wasiir maxamed muuse diiriyaha wasaaradiisu dawlaha amniga ee ogaa dikreto qoraal iyo taariikhba leh ee ka soo baxday wasaaradiisa ee dhigaysay in mooshinada la joojiyey horayna saylac u yimi dabadeedna faray badhasaabkii in uu kal fadhi aan caadi ahayn qabto?! miyaanu dawlada doc-wareen iyo duleyn dawladeed ku ahayn?
Waxa ka sii ayaan daran badhasaabka u dirsamay isagoo haya dikreetadii mooshinada lagu baajinaayey!! miyaanu ogeyn in shaqada xafiisyada dawlada waraaqo iyo dikreetooyin ka shaqeeyaan oo aan telephon lagu maamulin xafiisyada dawlada ?! khasaare fooqal khasaare !! noocaasaa dalka wax ka ah baadida ah?!.
5.) wasiir ku xigeenka caafimaadku hadii uu caafimaad qabo doorkii iyo kaalintii laga rabay xaalada saylac kamuu ciyaarin; dadku uu isweydiinayaan sababta uu uga gaabsaday hawlaha muskiisa yaala oo ah kuwa ugu mudan ee uu xilkaba u hayo; mise isaga laftiisa ayey wax siyihiin oo dhanka bidix ah; si uu xaal yahayba gaabis lagu tuhun wasiirkan.
Gabagabo: dawlada iyaday u taalaa waxa ay ka yeelayso wasiiru dawlaha amniga ; teelo iyo tudhaale toona umuu dhiganin AWDAL IYO SALAL horay iyo dambayso; waxa aan dawlada ka codsanayaa muwaadin reer salal ahaan in badhasaabka hada iyo maamulaha kastamaka saylac gobolku uu la huudmay oo khaati buu ka taaganyahaye sida ugu dhakhsaha badan nalooga badalo oo lagu soo badalo dad shaqada loo igmaday , dadka iyo deegaankaba fahmaaya oo garanaaya.